Attack On Titan 1 (2015) | MM Movie Store
Attack On Titan 1 (2015)
ဒီကားထှကျရငျ ဘာသာပွနျမယျလို့ပွောထားပွီး နောကျကနြလေို့ဆောရီးပါEnglish Srt File က မထှကျသေးတာရယျအလုပျတှလေဲမြားနတောရယျကွောငျ့ပါအခုတော့ အားလုံးပွီးသှားလို့ တငျပေးလိုကျပါပွီ။ဒီကားကို မကွညျ့ခငျအရငျ ဆုံးပွောခငျြတာကဇာတျကားပွီးလို့ စာတနျးထိုးပွီးတဲ့ထိပွီးဆုံးအောငျကွညျ့ပေးစခေငျြပါတယျ
wink emoticonလှနျခဲ့တဲ့ နှဈ၁၀၀ ကြျောကပျေါလာတဲ့ လူသားစားတဲ့တိုကျတနျတှေ..တိုကျတနျ တှကေိုကွောကျလို့ နံရံမွငျ့ကွီးတှေ ထဲမှာနနေရေတဲ့လူသားတှေ..တိုကျတနျတှကေို အယုံအကွညျ မရှိခဲ့တဲ့အဲရနျ နဲ့သူငယျခငျြး လူကွောကျလေးအာမငျ..ပွီးတော့ အဲရနျပွောသမြှယုံကွညျတတျတဲ့ ကောငျမလေးမီကာဆာတို့ ..နံရံ ကွီးတှရေဲ့အပွငျ ဘကျကိုထှကျဖို့ ကွိုးစားကွတဲ့တဈနမှေ့ာ….
တိုကျတနျတှေ ပျေါလာပွီးလူသားတှေ တိုကျခိုကျခံကွရပွီးတဲ့ နောကျမှာအဲရနျ အာမငျနဲ့ မီကာဆာတို့ ဘာတှပွေောငျးလဲ သှားကွမလဲဆိုတာရယျ…တိုကျတနျတှေ ကိုတိုကျခိုကျကွတာတှေ သကှေငျးသကှေကျတှကေ တကယျကိုကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ
ဒီကားဟာဂပြနျAnimation ဇာတျလမျးတှဲ တဈခုဖွဈပွီး ဂပြနျမှာလဲအရမျးနာမညျကွီးတဲ့ ကားဖွဈပါတယျ( ဒီကားကို ရုံတငျတုနျးကလကျမှတျမရလို့ ရုံးလဈပွီးကိုသှားကွညျ့ပါတယျ tongue emoticon )Anime ကွညျ့ဖူးသူတှကေတော့ ဒီကားဟာAnime ကို မမှီဘူးလို့ပွောကွပါလိမျ့မယျ
Anime ဗားရှငျးထဲက မီကာဆာရဲ့ကာရိုကျတာဟာ Live-Action Movie ထဲက ကာရိုကျတာနဲ့ လုံးဝကိုကှဲပွားနတေဲ့ အခကျြလဲပါပါ လိမျ့မယျဘာပဲဖွဈဖွဈ Animated လုပျထားကားကို ရုပျရှငျ ရိုကျရတာလှယျတာတော့ မဟုတျပါဘူးနောကျပွီး ဒီကားထဲကအဓိက ဖွဈလာမဲ့တိုကျတနျကို သရုပျဖျောထားတာလဲတျောတျော ကိုကွညျ့လို့ ကောငျးတာကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ
ဒီဇာတျကားကို အညှနျးရေးကွတဲ့သူတှလေဲ မြားနတေဲ့ အတှကျဇာတျလမျးအကွောငျးကို သိပျမပွောတော့ပါဘူးကိုယျတိုငျ ကွညျ့တာပို အရသာရှိမယျထငျပါတယျ
ဒီကားထွက်ရင် ဘာသာပြန်မယ်လို့ပြောထားပြီး နောက်ကျနေလို့ဆောရီးပါEnglish Srt File က မထွက်သေးတာရယ်အလုပ်တွေလဲများနေတာရယ်ကြောင့်ပါအခုတော့ အားလုံးပြီးသွားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒီကားကို မကြည့်ခင်အရင် ဆုံးပြောချင်တာကဇာတ်ကားပြီးလို့ စာတန်းထိုးပြီးတဲ့ထိပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်
wink emoticonလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၁၀၀ ကျော်ကပေါ်လာတဲ့ လူသားစားတဲ့တိုက်တန်တွေ..တိုက်တန် တွေကိုကြောက်လို့ နံရံမြင့်ကြီးတွေ ထဲမှာနေနေရတဲ့လူသားတွေ..တိုက်တန်တွေကို အယုံအကြည် မရှိခဲ့တဲ့အဲရန် နဲ့သူငယ်ချင်း လူကြောက်လေးအာမင်..ပြီးတော့ အဲရန်ပြောသမျှယုံကြည်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးမီကာဆာတို့ ..နံရံ ကြီးတွေရဲ့အပြင် ဘက်ကိုထွက်ဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့တစ်နေ့မှာ….
တိုက်တန်တွေ ပေါ်လာပြီးလူသားတွေ တိုက်ခိုက်ခံကြရပြီးတဲ့ နောက်မှာအဲရန် အာမင်နဲ့ မီကာဆာတို့ ဘာတွေပြောင်းလဲ သွားကြမလဲဆိုတာရယ်…တိုက်တန်တွေ ကိုတိုက်ခိုက်ကြတာတွေ သေကွင်းသေကွက်တွေက တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်
ဒီကားဟာဂျပန်Animation ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂျပန်မှာလဲအရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်( ဒီကားကို ရုံတင်တုန်းကလက်မှတ်မရလို့ ရုံးလစ်ပြီးကိုသွားကြည့်ပါတယ် tongue emoticon )Anime ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ ဒီကားဟာAnime ကို မမှီဘူးလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်
Anime ဗားရှင်းထဲက မီကာဆာရဲ့ကာရိုက်တာဟာ Live-Action Movie ထဲက ကာရိုက်တာနဲ့ လုံးဝကိုကွဲပြားနေတဲ့ အချက်လဲပါပါ လိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Animated လုပ်ထားကားကို ရုပ်ရှင် ရိုက်ရတာလွယ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီး ဒီကားထဲကအဓိက ဖြစ်လာမဲ့တိုက်တန်ကို သရုပ်ဖော်ထားတာလဲတော်တော် ကိုကြည့်လို့ ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ဒီဇာတ်ကားကို အညွှန်းရေးကြတဲ့သူတွေလဲ များနေတဲ့ အတွက်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို သိပ်မပြောတော့ပါဘူးကိုယ်တိုင် ကြည့်တာပို အရသာရှိမယ်ထင်ပါတယ်
Justice Bao-The Myth of Zhanzhao (2020)
Fist of Fury (II) (1991)
Sherlock (Season 1,Episode 3) – The Great Game
Call Mom! (2020)